Sei kubvisa mburwa mavanga: mira makwapa kumeso? – Jannah News
Sei kubvisa mburwa mavanga: mira makwapa kumeso?
How kubvisa mburwa napapa nokukurumidza pamba
Mavanga uye mburwa mavanga pashure
How kubvisa mburwa mavanga kumeso
Sei nokukurumidza kurasa Mapundu panhengo yako kumba
Mavara pashure mburwa: как сделать кожу идеальной дома
How kubvisa mburwa vanga: danho nedanho gwaro, mufananidzo, nyanzvi zano
Home/Acne/Sei kubvisa mburwa mavanga: mira makwapa kumeso?
mukadzi – hunhu chokusika,
panobva simba raro riri okugadzira zvinhu.
Unoda kubvisa pakati echitema, mavanga uye mburwa mavanga pashure pachako?
makadii, vaverengi anodiwa of Blog!
Tichazotaura mberi kwedu kukurukura pamusoro nyaya post-mburwa (mibairo pustules). nhasi, tichazvidudzira, sei kubvisa mburwa mavanga kumba uye kugoverana yokubika inonyatsobudirira Masiki. uye, isu tichati kuzarura zvakavanzika, sei kuvanza zvikanganiso pamwe wakagadzirwa.
Nyaya yedu ichakubatsira kurasa kusakwana! Garai nesu uye nokurava.
Most vakatendeka nzira ndichiva kuparadza echitema uye mavanga
How kuti kunge post-mburwa musha?
Kuzvimba ganda anogara kutiita kuti zvisingafadzi manzwiro. kunyanya, pavanoita nemigumisiro, uye vanosiya "chiyeuchidzo" muchimiro mavanga kana indentations paganda. Tinoedza kuva vamuuraye. nhasi, tichagovana nemi mazano, izvo zvichakubatsira kuti kubvisa mavanga kumba.
Zvingaita sezvinoshamisa, kuti kuzvipira zvakachena post-mburwa - hazvibviri. zvisinei, kana nguva kutanga kuita muitiro - zvose zvinogoneka, nekuti yakachena mavanga kuunza nyore zvikuru!
Nzira inobudirira kuderedza mavanga:
Excellent kunetseka post-mburwa zvizorwa wakisi. Nzira chikumbiro zvikuru nyore: fuma Unonyunguduka, pointwise akashandisa uye akabvisa pashure nokuomesa. Zvadaro iva nechokwadi kushandisa moisturizing ruomba.
Unogona kutenga nayo pano .
Bleaching - nzira huru kubvisa zera mavara, Vhenekerai mavanga. Unogona kuita izvi nokushandisa chinokosha zvizoro, uye kushandisa Masiki, unogona nyore kuita pamba.
Recipes mumakenduru, scrubs nezvifukidziro unogona kuverenga panoperera nyaya ino. Bleaching kunobatsirawo kuti kunyange ganda rifanane, zvichiita chechetere, velvety.
Massage pamwe zvizorwa anonhuwirira. Kubatsira chiso masaja anogona kutaura nokusingaperi! Handiti zvinobatsira kuderedza kukwegura, It Machiridza ari dermis, smoothes ganda. The mafuta zvizorwa, unogona kuwedzera 1-2 madonhwe raEta.
Somuenzaniso: 1 yetea omuarumondi mafuta uye 2 samadonhwe mafuta tii muti, Eucalyptus, Rosemary. Akashambidzika kufamba varikwizire muvhenganiswa pamusoro masaja mitsetse.
Murwiyo kwemafuta, sezvo muchiziva, kosha chaizvo, zvinhu, kuti zvine mashoko Eteri mhanyisa muviri, mhanyisa patsva masero uye ndokudzora Epiderme e.
Darsonval mudziyo - kuchakubatsira kubvisa echitema. Nokuda zvishomanana yemagetsi ukapisa murwi, iye nokungwarira anoshanda pamusoro dermis. pulses, kuburikidza mokugezera, uyai Epiderme e. Ipapo Mabhakitiriya vanourayiwa, kunosiya kuzvimba.
Darsonval zvakare Inowedzera ropa kutenderera. Enderana kushandiswa saasipo, kungoda mavanga, mavanga. Uyewo anovandudza ezvinhu dermis rose, kutanga chirongwa patsva, zvaanopa simba kugadzirwa collagen, elastin, gilaurona.
Akabatana mumakenduru, lotions, scrubs - uchawana zvinoshamisa nomugumisiro! mukana Buy midziyo Darsonval .
Zvinobatsira kuti lotions pamwe cider vhiniga uye ndimu. Hazvina chete whitens, asi kunosimudzirawo nokukurumidza nokuporesa munyama, Inowedzera patsva, smoothes ari Epiderme e, Rinopa elasticity.
tora mavhitaminzi zvenyu, kunyanya, A uye S. Courses mu 2 pamwedzi. Vanobatsira kuvandudza ganda ezvinhu. wo, kunwa mvura yakakwana.
Dzivirirai ganda rako kubva UV mwaranzi -inache achava kuumba rima makwapa, kuti, zvachose, shongedza chitarisiko. kunyanya, kana ukaita asidhi rinokwatuka kana kushandisa zvinokosha anonhuwirira pamusoro Orange, ndimu, bhuratifuru.
maonero, Mazano vari nyore zvikuru! Panguva Chaiyo mharuro treatment - ndiko abudirire, dzinobvumirana? Kumba, unogona kubvisa post-mburwa.
Ungada kushandisa yaivapo kuchirapa vamiririri, Anoreva paIndaneti chitoro chezvinodhaka pezvitsiga Pharmacosmetica .
Chokwadi, kana zvikuru nyaya: zvakadzama mavanga, vane unhealed kuzvimba, uye dzidzo subcutaneous - zvakakodzera kushanyira dermatologist. Simba zvinofanira chete aporeswa Epiderme e, hapana zvinoonekwa zviratidzo kuzvimba uye suppuration.
Secrets ane make-kukwira, kuti achakubatsira kuviga mavanga:
Shandisa paganda lähikuva, kuchabatsira kuti vaenzanise kuzorodzwa.
mberi, kushandisa chaiyo mumakwenzi kana chipanji Isa concealer. No vanofanira kugadzira unhani yakanyanya gobvu! Inogona kuzadza pores uye kutowedzera mamiriro ezvinhu.
On the nzvimbo dzaparadzwa, anoshanda concealer, zvichaita kuvabatsira kuti tivhare
Hide akatsvuka rubatsiro girini concealer, zviri zvakakwana kuzvivanza. Shandisa zvinofanira Dziine ine bhurasho.
Isa cheno kushandisa upfu.
Rangarira mutemo: hazvina zvakakodzera kuti govera ziso kana muromo. Zviri nani kuti zvishoma madudziro emazwi pamusoro pemaziso, miromo vanofanira kushandisa lipstick kana Gloss mumvuri nyudovogo, meso anogona kuunza zvishoma matema penzura.
Nguva dzose shandisa mhando, kwaedzwa zvizoro , izvo haakonzeri Kurwara.
Kune vakaisvonaka zvivako, kuti iwe unogona kubika kumba. Ivo zvichakubatsira kuti uderedze kuvaviwa, uye mhanyisa ropa kufamba kweropa uye patsva. Uchanzwawo cherechedzai, ganda vachapenya norunako uye utano.
Chikurukuru, yeuka - kuti Masiki, svuura uye kushandisa ruomba vanofanira kugara, zvimwe mugumisiro nzira havazodyari.
Unofanira kuva nemwoyo murefu, sezvo inofanira kubereka collagen zvakakwana, vachava zvaangagutsa muzvinhu dzaparadzwa. Zvizorwa zvigadzirwa haazorambi chete kuchakubatsira kurasa mavanga, asi kudzivirira mburwa.
Masiki nevhu pamwe kuwedzera ethers kubatsira kuvandudza ganda ezvinhu, mhanyisa patsva. Zvakakosha chaizvo, kubereka collagen uye elastin. Pashure pezvose, zvinhu zviviri izvi zviri kukonzera kuti elasticity rweganda redu.
esters (Rosemary, elavender, manuka, ndimu) kwete chete mhanyisa ropa kutenderera, asiwo unosimudzira nokukurumidza kuporesa post-mburwa.
Clay - dzinopomhodza, Inochenura pores uye moisturizes. Wedzera mafuta chena kana munyoro ivhu kuti zvinyoronyoro - achava zvakakwana 1-2 madonhwe.
Honey nesinamoni - kuita zvinyoronyoro dermis, silky, uchisimbisa uye moisturize. Uchi - zvinoshamisa chigadzirwa, izvo zvinobatsirawo kubva nhamba zvirwere uye rinowanzoshandiswa zvinangwa zvizorwa. Nekinamoni - inotanga kudziya ganda, It ukurumidze muviri.
zvizorwa chando - zviri nyore chaizvo kuti tigadzirire! Zvakakodzera kutora parsley, nenguvo dzakarukwa zvakanaka dimura nayo (kana dimura vari blender) dira mvura iri kufashaira, regai yokubika ugodira kuva anokosha siyana kuti chando. Very kubatsira kutsakatisa chiso ice mangwanani uye manheru. Mangwanani - nzira iyi here vachikuza, manheru - kuderedza kuneta uye kuzvidya mwoyo pashure basa.
Badyaga pamwe rehydrogen peroxide - anobudirira Mushonga, izvo zvinobatsira kuti vaenzanise ganda, kubvisa kuzvimba uye anobatsira kuvaviwa. Recipe Mask anenge ari: 1 ivhu chipunu, 1 chipunu uye mimwe misanganiswa 4 samadonhwe rehydrogen peroxide 3%.
Sarudza kupfuura iwe aida kunge post-mburwa uye uzviite ose zuva. Chinhu zviripo kuti zvinyorwe ayo kutarisirwa vachidzipukuta chando uye Paraffin. Complex kurapa uye nokungwarira ganda uchenjerere ukunde zviratidzo mburwa.
Shandisa Organic zvizoro , rarira kunzwisisa vhitamini .
kana, Pashure 2-3 mwedzi uchaona kuchinja zvinoonekwa, unofanira watarisa dermatologist kana beautician. Zvichengetedze, kutarisira ganda dzose nguva - uye iye achava mazviita!
Kurera matambudzo zvose nyaya mburwa, Tichava kudzidza pamusoro zvinokonzera chitarisiko chavo, sei kuvabata uye kushevedzera kuti ubatsirwe.
pakupedzisira, nhasi akasangana nzira, sei kukunda post-mburwa pamusha. Recipes Masiki Siyanisai kwenyu kuzvidzora kutarisirwa uye kuti ganda kumeso uye silky.
Rangarirai - iwe Wakanaka!
Subscribe kuti Blog, nokuchengeta sezvaaienderana ose zvigadzirwa zvitsva kubva munyika runako, utano zvinhu uye.
Kuudza neshamwari dzako, nekuti musoro uyu inonetsa vakawanda.
Sezvo maiva Ilona
Kana ino tsira, unoruonga - kuvheneka moyo)))
Folk mishonga nokuti mburwa - 10 Vanobudirira Kubika musha
Tichingoda mburwa: как избавиться от рубцов и шрамов?
Acne mavanga: Panzira dzinobudirira chokubvisa, Zvirwere ganda
14 iripo nzira zvose ndichiva kubvisa mburwa mavanga pashure
How kubvisa mburwa chiso chako pamusha
How kubvisa kungoda Mapundu panhengo chake - red makwapa, mavanga
How kubvisa mavanga pashure mburwa?